LIFX Beam, inoshamisa magetsi system | IPhone nhau
LIFX Beam, inoshamisa magetsi system
Luis Padilla | | IPhone zvishongedzo, dzakawanda
Kuvhenekera kwakambomira kuve sisitimuwo zvayo yekugona kuona, uye kusvika kwehurongwa hwakangwara kwakaita kuti ive chinhu chekushongedza chinowanikwa kune chero munhu. Isu takaedza imwe yemhando dzakanakisa dzekuvhenekesa mwenje masisitimu atinogona kuwana mumusika asiri wehunyanzvi: LIFX Beam.
Inoenderana neKeKKit, Amazon Alexa, Google Home uye kunyangwe Microsoft Cortana, ino sisitimu inoisa mumaminetsi mashoma pasina kudiwa kwechero mhando yechishandiso uye inokupa iwe nzira dzekuvhenekesa dzisingazosiya chero munhu asina hanya. Takazviongorora uye tinokuratidza ongororo yedu muchinyorwa chino, asi usarasikirwe nevhidhiyo iri pamwe chete.
1 Kit ine zvese zvaunoda
2 Chikumbiro chevhitamini
3 Maonero emupepeti
Kit ine zvese zvaunoda
Mukati mebhokisi reichi LIFX Beam iwe unowana zvese zvaunoda zvekumisikidza, uye hauzoone chishandiso, kunyangwe iri nyore screwdriver. Inosanganisira 6 mabara emwenje, chinongedzo chekona, iyo adapta uye tambo yekuivhara mukati uye kadhi ine kodhi yekumisikidza yeKeKKit. Iyo tambo ndeyeyese ye2,5 metres kureba, saka haufanire kunge uine dambudziko rakawanda kusvika padyo padyo.
Bhawa rega rega rine nzvimbo gumi dzakasiyana dzinogona kuve nemavara akasiyana, saka unogona kukwira kusvika kumatunhu makumi matanhatu emuvara wakasiyana mune imwe neimwe LIFX Beam. Iyo mizariro inogadzirwa nepurasitiki inopenya, yakanyanyisa kupenya, uye yakabatana kune imwe neimwe kumagumo ne magineti ekubatana yakasimba zvakakwana kuita kuti sisitimu yese igadzikane. Mabhawa anonamirwa kumeso kwaunoaisa nenzira dzekunamira dziri kumashure.
Nezvidimbu zvinosanganisirwa muKit (LIFX haipe mukana wekuiwedzera kana kutenga zvimwe zvakazvimirira zvemakona zvidimbu) kudhirowa kwatingaite ndeya "L". Kunyangwe iri nyore kwazvo, kurudziro yangu ndeyekuti kuisa iyo system, tanga waedza pane yakati sandara nzvimbo yakadai semubhedha kana pasi, kubatanidza zvidimbu zvese, kusanganisira kona uye tambo, nekuti hazvisi zvese zvinongedzo zvakafanana, uye kana tikamisa zvisizvo zvisirizvo, tinogona kushamisika kuti tambo yacho haigone kubatanidzwa pamagumo atinoda, asi kune izvo zvinoramba zviri Mberi.
Kana tangojekesa nezve dhirowa, zviri nyore sekuisa, nerubatsiro rweyero, mabhawa rimwe nerimwe uye nekutsimbirira kuitira kuti chinamatira chizadzise chinangwa chayo. Kunyangwe paine chokwadi chekuti madziro kwandakaisa haana kunyatsosimbiswa, sezvaungaona mumufananidzo, pakanga pasina dambudziko kuti mabhawa anyatso akanamwa, uye kuve akareruka njodzi yekuti ivo vadonhe nekuda kwehuremu hwavo hapana.
Maitiro ekugadzirisa akafanana akafanana atakadzokorora kakawanda nechero inoenderana neKeKK, saka kana iwe uri mutsva kune izvi ndinokukurudzira kuti utarise chero vhidhiyo kubva kuKeKit playlist (link). Iwe unongofanirwa kuvhura iyo Kumba kunyorera, tarisa kodhi yacho paLIFX Beam Kit kadhi uye upe chinongedzo zita nenzvimbo kana yawedzerwa. Ikozvino yagadzirira kushandiswa neyako otomatiki kana inodzorwa nezwi rako uye yako HomePod. Kana iwe ukasarudza chero mumwe mubatsiri akadai seAmazon Alexa kana Google Imba, uchafanirwa kuteedzera yavo yega gadziriso sisitimu.
LIFX Beam inogona kudzorwa neImba app senge chero imwe girobhu. Kubatidza, kudzima, kudzikira uye kushandura iro bhaa rebhawa senge chero mwenje mwenje mwenje kutamba kwemwana, uye iwe unogona kuzviita kuburikidza nezwi rako, kana kugadzira otomatiki kana iwe uchinge wasvika kumba, ndokuti, yakatarwa nguva yezuva. Zvese izvi zvakanaka kwazvo, asi ndizvo chete zvatingaite nechero girobhu risinganetsi, dambudziko nderekuti Casa haitibvumire kuti tiite chero chimwe chinhu.
Uye hongu, idambudziko, nekuti nekuona zvatingaite neLIFX application yatinayo muApp Store (link) uye Google Play (link) uye kunyangwe muMicrosoft Windows (link) isu takapfupika chaizvo izvo iyo HomeKit inotipa isu uye neyayo yekushandisa application. Sarudzo dzakabatanidzwa muCasa dzakatoverengerwa muLIFX app, asi isu tinogona zvakare kusarudza madingindira akasiyana, sekuenzanisa mwenje wekenduru. Isu tinowana inoenderana, inonakidza, yemitambo madingindira eHalloween ... Tinogona zvakare kugadzira mhedzisiro uye pano "Music Visualizer" inomira kupfuura zvese.: kune mutinhimira wemumhanzi, iyo LIFX Beam mwenje ichasiyana mukukwirisa uye neruvara, uye ichifamba kuburikidza nenzvimbo dzakasiyana dzebhawa yega yega.
Magetsi akangwara asvika mudzimba medu, uye LIFX Beam ndiyo imwe yemaitiro epamberi atinogona kuwana izvozvi. Nekuisa nyore kwazvo, isu tichawana zvakasiyana zvinoshandiswa pachiitiko chega chega. Kubva mukugadzira yakasununguka mamiriro ekudya kwemanheru, kupa kumwe kwekumashure mwenje uchiona bhaisikopo, kana kunakidza pati kune rwiyo rwemumhanzi, iyi LIFX Beam iri, pasina kupokana, iyo inoshamisa sisitimu yandakakwanisa kuyedza kusvika ikozvino. Kuti uwane chakaremara, LIFX haina kupa sarudzo dzekuwedzera. Mutengo waro, € 199 kubva kune yepamutemo LIFX webhusaiti (link).
5 nyeredzi chiyero
Kudzokorora kwe: Luis Padilla
Yakapusa uye isina chishandiso kumisikidza
Inoenderana neese pamba otomatiki masisitimu, kusanganisira HomeKit
10 mavara enharaunda kune yega yega matanhatu mabara
Yemahara LIFX app ine dzakawanda sarudzo
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » LIFX Beam, inoshamisa magetsi system
Elago W5 Mira inoshandura yedu Apple Tarisa kuita Game Boy
Apple inogadziridza iyo WWDC app kuti iite ienderane neiyo nyowani iPad Pro